အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက် တန်တန်ရရှိခဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ရဲ့ နောက်ကွယ်က ပရိတ်သက်တွေမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာများ…. – Shwe Naung
N N | June 11, 2021 | Celebrity | No Comments
ဝတ်မှုံ ရွှေရည်ဟာ ဩဂုတ်လ ၁ဝရက် ၁၉၈၈မှာ မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊သူမရဲ့ မိဘတွေဟာ ဦးဝင်းသိန်းနိုင်နှင့် ဒေါ်နန်းမိမိလွင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။သူမမှာမိသားစုရဲ့ အကြီးဆုံးသမီး ဖြစ်ပီးညီမငယ် လေးတစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင် ထားပါတယ်၊
သူမရဲ့နံမည်ကတော့ နဒီရွှေရည် ဖြစ်ပါတယ်၊သူမဟာ ဒဂုံတဣသိုလ်ကနေ အဂ်လိပ်စာအထူးပြုမေဂျာနဲ့ ဘွဲရရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ၂၀၀၅မှာကြော်ငြာ ရေပန်းစားနဲ့ မော်ဒယ်တစ်ယောက် ဖြစ်လာပါတော့ တယ်၊
၂၀၁၃မှာတော့ သူမဟာ ရုပ်ရှင်တွေစတင် ရိုက်ကူးပါတော့တယ်၊၂၀၁၈မှာတော့ သူမဟာ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ဆုကြီးကိုထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၈ခုနှစ် မှာ တော့ သူမဟာ tv ကြော်ငြာ အခုရေ၃၀၀၊ဗီဒီယို ဇတ်ကား၂၀၀ နှင့်ရုပ် ရှင် ကား၄ရိုက် ကူးပီးစီးခဲ့ ပါတယ် ၊စကစရဲ့အာဏာသိမ်းမှု့ကိုလည်း လက်မခံနိုင်လို့ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူမားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့ သူလည်းဖြစ်ပါ တယ်။
အကယ်ဒမီ မင်းသမီးဖွေးဖွေး နဲ့လည်း ညီအစ်မ တစ်ဝမ်းကွဲ တော် စပ် သူ လဲဖြစ် ပါ တယ် ။ညီ အစ်မ နှစ်ယောက် စလုံးရဲ့ အနုပညာ အရည် အချင်း က တော့ ပြော နေစရာ တောင် လို မယ် မထင်ပါ ဘူးနော်
ပရိတ်သတ်ကြီး တို့ စိုးရိမ် သ လို များ နောက်ကွယ် က အရှုပ် အရှင်း ကင်း တဲ့ မင်းသမီး ချောလေး တစ်လက်ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် နော် အခုလိုဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့ ပေးကြတဲ့
ပရိတ်သတ် တစ်ယောက်ခြင်းစီတိုင်းကျန်းမာ ပျော်ရွှင်သောနေ့ရက် များပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ တယ်။
ရင်ဖိုစရာ ကောက်ကြောင်းအလှတရားလေးနဲ့ ဆွဲ‌ဆောင်အားပြင်းပြင်း ညို့ယူဖမ်းစား ထားတဲ့ နွယ်ဒါလီထွန်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……….
ရွှေရင်မွှာလေးတွေ မြင်သာအောင် ဆက်ဆီကျကျ အမိုက်စား ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ မရန်ဆိုင်းနူးရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……..
အိမ်အောက်မှ ကပ်နေနေရတဲ့ အဖွားဒေါ်ပုထံသို့ အလှူငွေတွေကို သွားရောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး’သဉ္ဇာမြင့်မိုရ်’